Inona ny Soa Raisinao Rehefa Mivavaka Ianao?
Ny Tilikambo Fiambenana | No. 1 2021
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuuk Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabarde-Tcherkesse Kabiyè Kabuverdianu Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Belize Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Kyangonde Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mizo Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Népali Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Palau Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Vlax any Rosia) Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Narary mafy i Pamela, dia nanatona mpitsabo matihanina. Nivavaka tamin’Andriamanitra koa anefa izy, mba hahazo hery hiatrehana an’ilay izy. Nanampy azy ve ny vavaka?
Hoy i Pamela: “Voan’ny kansera aho, dia natahotra be rehefa niatrika an’ilay fitsaboana. Rehefa nivavaka tamin’i Jehovah Andriamanitra anefa aho, dia lasa tony sady tsy natahotra be intsony. Mbola manaintaina ny vatako, nefa manampy ahy hifantoka amin’ny zavatra tsara ny vavaka. Rehefa manontany ny fahasalamako ny olona, dia izao no avaliko: ‘Mbola marary aho, fa matanja-tsaina!’”
Tsy voatery hiandry hoe manana olana ngezabe isika vao hivavaka. Miatrika zava-tsarotra daholo isika, na kely ilay izy na lehibe, ary matetika isika no mahatsapa hoe mila fanampiana mba hiatrehana azy ireny. Afaka manampy ve ny vavaka?
Hoy ny Salamo 55:22: “Apetraho amin’i Jehovah izay manavesatra anao, fa izy no hanohana anao. Tsy havelany hangozohozo mihitsy ny olo-marina.” Tena mampahery izany e? Nahoana àry no manampy anao ny vavaka? Rehefa mivavaka amin’Andriamanitra araka ny sitrapony ianao, dia omeny anao izay ilainao mba hiatrehana ny olana mahazo anao.​—Jereo ilay efajoro hoe “ Inona ny Soa ho Azonao Raha Mivavaka Ianao?”
Inona ny Soa ho Azonao Raha Mivavaka Ianao?
“Ampahafantaro an’Andriamanitra ny fangatahanareo. ... Ary ny fiadanan’Andriamanitra izay lehibe lavitra noho ny eritreritra rehetra no hiambina ny fonareo sy ny sainareo amin’ny alalan’i Kristy Jesosy.” (Filipianina 4:6, 7) Hanampy anao Andriamanitra rehefa resahinao aminy ny zavatra mampanahy anao. Ho tony ianao na dia miady saina aza, ary tsy hanaonao foana.
“Raha misy aminareo tsy ampy fahendrena, aoka izy tsy hitsahatra hangataka izany amin’Andriamanitra, fa malala-tanana amin’ny rehetra izy sady tsy manome tsiny. Dia homena azy izany.” (Jakoba 1:5) Tsy mahay manapa-kevitra isika matetika rehefa ao anatin’ny sarotra. Raha mangataka fahendrena amin’Andriamanitra anefa isika, dia hampahatsiahiviny antsika ireo toro lalana mahasoa ao amin’ny Teniny, dia ny Baiboly.
Hahazo hery sy fampiononana
“Manana ny hery hiatrehana ny toe-javatra rehetra aho, amin’ny alalan’ilay manome hery ahy.” (Filipianina 4:13) Andriamanitra mahery indrindra i Jehovah, ka afaka manome hery anao na manohana anao rehefa tojo zava-tsarotra ianao. (Isaia 40:29) Milaza koa ny Baiboly hoe “Andriamanitry ny fampiononana rehetra” i Jehovah. Afaka mampionona antsika amin’ny “fahoriantsika rehetra” izy.​—2 Korintianina 1:3, 4.
TIANAO VE NY HANDRAY SOA?
Tsy manery anao hivavaka aminy i Jehovah. Manasa anao hanao an’izany kosa izy. (Jeremia 29:11, 12) Ahoana anefa raha efa nisy zavatra nangatahinao, nefa hoatran’ny hoe tsy namaly anao izy? Aza kivy. Diniho izao: Ahoana raha mangataka fanampiana amin’ny mpivady iray ny zanany? Mety tsy hifanaraka tanteraka amin’ny eritreritr’ilay zanany ny zavatra ataon’izy mivady, na tsy ataony amin’ny fotoana eritreretin’ilay zaza. Nahita hevitra tsara kokoa angamba izy ireo. Azo antoka anefa hoe manampy ny zanany ny ray aman-dreny be fitiavana.
Te hanampy anao koa i Jehovah Andriamanitra, ilay ray be fitiavana indrindra. Raha miezaka mampihatra ny torohevitra nomena tato ianao, dia hamaly ny vavaka ataonao izy, ary ny valim-bavaka tsara indrindra no homeny anao.​—Salamo 34:15; Matio 7:7-11.
Inona ny soa ho azonao raha zatra mivavaka ianao?
Hizara Hizara Inona ny Soa Raisinao Rehefa Mivavaka Ianao?
wp21 No. 1 p. 14-15
Inona no Lazain’ny Olona Momba ny Vavaka?
Mihaino ny Vavaka Ataontsika ve Andriamanitra?
Nahoana no Tsy Misy Valiny ny Vavaka Sasany?
Inona no Tokony Hataonao?
Mihaino ny Vavaka Ataonao ve Andriamanitra?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Tena Ilaina ve ny Mivavaka?
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Tena Ilaina ve ny Mivavaka?
Tena Ilaina ve ny Mivavaka?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Tena Ilaina ve ny Mivavaka?
6 Tena Manampy ve ny Vavaka?